စငျကာပူဟာ အကငျြ့ပကျြ လာဘျစားမှု ကငျးစငျတဲ့ နိုငျငံ ဖွဈလာခဲ့ပုံ - Thutazone
စငျကာပူဟာ အကငျြ့ပကျြ လာဘျစားမှု ကငျးစငျတဲ့ နိုငျငံ ဖွဈလာခဲ့ပုံ
စငျကာပူဝနျကွီးခြုပျ လီရှနျလှနျးပွောတဲ့ စငျကာပူရဲ့ ခွစားမှု တိုကျဖကျြရေး
ဘာသာပွနျရေးသားသူ – ကိုငွိမျးခနျ့ (NyeinKhant)
ခွစားမှုဆိုတာ နညျးနညျးမှ သညျးခံပေးလို့ မဖွဈတဲ့ ရောဂါဆိုးပါပဲ။ နိုငျငံအသီးသီးက ဒီကိစ်စကို တိုကျထုတျဖို့ နညျးပေါငျးစုံနဲ့ ကွိုးပမျး ခဲ့ကွတယျ။ ခွစားမှုတိုကျဖကျြရေး ဌာနဖှဲ့တယျ၊ ပွငျးထနျတဲ့ ဥပဒတှေေ ပွဋ်ဌာနျးတယျ၊ ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှေ လိုကျနာဖို့ ကငျြ့ဝတျဥပဒတှေေ ထုတျပွနျတယျ၊ ကုမ်ပဏီတှဘေကျကလညျး လုပျငနျးတှကေို သနျ့ရှငျးတဲ့နညျးတှနေဲ့ ဆောငျရှကျမယျလို့ ကတိပွုကွတယျ။
ဒါတှေ လုပျပါရဲ့နဲ့ ဒီခွစားတဲ့ကိစ်စဟာ လူ့အဖှဲ့စညျးထဲမှာ မွဈပှားနာလိုပဲ ရှိနဆေဲပဲ။ ဒါနဲ့တောငျ စငျကာပူ၏ ခွစားမှု လြှော့ခရြေးကိစ်စမှာ အတိုငျးအတာတခုအထိ ဘာကွောငျ့အောငျမွငျမှုရခဲ့သလဲ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ရငျ အကွောငျးတရား ၄ ခကျြရှိတယျလို့ တှရေ့မယျ။
ပထမ အခကျြကတော့ ဗွိတိသြ ကိုလိုနီအုပျခြုပျရေးရဲ့ သနျ့ရှငျးပွီး အလုပျဖွဈတဲ့ စနဈကို အမှခေံရတယျ။ ကိုလိုနီစနဈခြုပျငွိမျးပွီး ကိုယျ့ကံကွမ်မာ ကိုယျဖနျတီးခငျြရတဲ့ အကွောငျးရငျး အမြားကွီးရှိခဲ့ပမေယျ့ ဗွိတိသြှတို့ရဲ့ ကြေးဇူးမကငျးတဲ့ ကိစ်စတှကေတော့ အလုပျဖွဈပွီး ခိုငျမာတဲ့ အင်ျဂလိပျဥပဒေ၊ ပွညျသူဝနျထမျးစနဈနဲ့ သှကျလကျပွီး သမာသမတျရှိတဲ့ တရားစီရငျရေး စနဈတှပေါပဲ။ ကိုလိုနီစညျးမဉျြးခံ ဝနျထမျးတှရေဲ့ အလုပျလုပျပုံ အဆငျ့မွငျ့မားခဲ့တာကလညျး အရေးကွီးတဲ့ အခကျြတခကျြပါပဲ။
စငျကာပူရဲ့ နောကျဆုံး ဘုရငျခံနဲ့ ပထမဆုံးနိုငျငံ့ ခေါငျးဆောငျ ဖွဈခဲ့တဲ့ ဆာဝီလယံဂူး ဆိုရငျ တာဝနျလညျးသိ ခေါငျးဆောငျရညျလညျး ပွညျ့ဝခဲ့တယျ။ သူဆိုရငျ (ယခု မလေးရှား ဆာဘား ပွညျနယျ) အရငျ မွောကျဘျောနီယိုမှာ ဘုရငျခံအဖွဈ ဆကျလုပျတော့လညျး စငျကာပူတုနျးကလို နာမညျကောငျးကနျြခဲ့တာပါပဲ။ ဆာဘားပွညျနယျမှာ နောကျမြိုးဆကျအထိ သူ့ကို အမှတျရကွဆဲပဲ။
ဒုတိယ အကွောငျးတရားကတော့ ဗွိတိသြှတှေ ထှကျသှားပွီးတဲ့နောကျ စငျကာပူရဲ့ ခေါငျးဆောငျကွီးတှရေဲ့ စနဈကို သနျ့ရှငျးအောငျထားမယျဆိုတဲ့ သန်နိဋ်ဌာနျပါပဲ။ PAP ပါတီအနနေဲ့ ၁၉၅၉ လှတျလပျရေးရအပွီး အာဏာရလာခဲ့တယျ ဆိုပမေယျ့ ၁၉၅၉ ရှေးကောကျပှဲမှာ လှယျလှယျ နိုငျခဲ့တယျတော့ မဟုတျဘူး။
တိုငျးပွညျအနနေဲ့ ဆငျးရဲမှဲတတော၊ ကနျြးမာရေး အဆငျ့အတနျး နိမျ့ကတြာ၊ အိမျယာ မလုံလောကျတာ၊ စီးပှားရေး ကတြာနဲ့ လူဦးရေ ပေါကျကှဲတာ စတဲ့ ပွသာနာပေါငျး မွောကျမွားစှာ ကွုံခဲ့ရတယျ။ PAP ပါတီအနနေဲ့ ဒီပွသာနာပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျကို အမှခေံလိုခဲ့တာလား။ ဘာလို့ အတိုကျအခံအဖွဈပဲ ရပျတညျပွီး တခွားပါတီကို အုပျခြုပျစေ၊ ကဆြုံးစလေို့ မလုပျခဲ့သလဲ။
ဝနျထမျးတှေ ခွစားတဲ့ လမျးကွောငျးပျေါ မရောကျသှားအောငျ ကာကှယျဖို့ ကိစ်စက အလှနျအရေးကွီးတယျဆိုတဲ့ အခကျြကပဲ ဝနျကွီးခြုပျ လီကှမျယူနဲ့ သူအဖှဲ့ကို ဒီလိုဆုံးဖွတျဖို့ တှနျးအားပေးခဲ့တယျ။ ညံ့ဖငျြးတဲ့၊ ခွစားတဲ့ အစိုးရတဆကျကွောငျ့ ကကြှဲသှားတဲ့ ကွှပေနျးကနျ အကောငျးပွနျမဖွဈနိုငျတော့သလိုပါပဲ။
ဒါကွောငျ့ပဲ PAP ပါတီအနနေဲ့ နိုငျအောငျပွိုငျပွီး အစိုးရဖှဲ့ခဲ့တယျ။ လီကှမျးယူနဲ့ သူ့အဖှဲ့ဝငျတှေ ရာထူးလကျခံဖို့ ကမျြးသစ်စာ ကြိနျဆိုပှဲမှာ အင်ျကြီဘောငျးဘီ အဖွူဝတျခဲ့တယျ။ အစိုးရကို သနျ့ရှငျအောငျနဲ့ ခွစားလို့မရအောငျ ထားမယျဆိုတဲ့ သန်နိဋ်ဌာနျကို ပွတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒီအခြိနျကစလို့ စငျကာပူရဲ့ လမျးကွောငျးကို ခမြှတျခဲ့တယျ။
တတိယ အခကျြကတော့ ဥပဒေ ရေးဆှဲတာ၊ ဥပဒကေို စိုးမိုးအောငျလုပျတာ၊ ဝနျထမျးအဖှဲ့အစညျးနဲ့ လူထုတှပေါ ပါတဲ့၊ ပွီးပွညျ့စုံပွီး ခိုငျမာတဲ့ ခွစားမှုကာကှယျရေး မူဘောငျတှကေို အဖှဲ့အစညျးတှအေားလုံးမှာ သကျဝငျအောငျ နိုငျငံရေး ခှနျအား အပွညျ့နဲ့ ဖျေါဆောငျခဲ့တာပါပဲ။ ခွစားမှုကာကှယျရေး ဥပဒကေို ပွဋ်ဌာနျးခဲ့ပွီး၊ ဒီဥပဒအေရ ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို တရားတဲ့ နညျးလမျးနဲ့ ရထားတာဖွဈကွောငျးကို စှပျစှဲခံရသူဘကျက သကျသပွေရတယျ။ ဝငျငှနေဲ့ မလြျောညီတဲ့ မဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို လာဘျယူထားတာအဖွဈ သတျမှတျပွီး သိမျးဆညျး ခံရမယျ။
ဒီဥပဒကေို နိုငျငံရပျခွားအထိ သကျရောကျမှုရှိအောငျ ရေးဆှဲထားတဲ့ အတှကျကွောငျ့ နိုငျငံခွားမှာ ကြူးလှနျသညျ့တိုငျ၊ နိုငျငံကို မထိခိုကျစဘေူး ဆိုရငျတောငျ ပွညျတှငျးမှာ ကြူးလှနျတဲ့ အမှုလိုပဲ သတျမှတျတယျ။
ခွစားမှုတိုကျဖကျြရေး ဌာနဖွဈတဲ့ အကငျြ့ပကျြမှုစုံစမျးစဈဆေးရေးဗြူရို (CPIB) ဟာဆိုရငျ အငျအား အထောကျအပံ့ ပွညျ့စုံပွီး လှတျလပျစှာ ဆောငျရှကျနိုငျတယျ။ ဒီအဖှဲ့ အနနေဲ့ ရဲအရာရှိ၊ ဝနျကွီးတှအေပါအဝငျ ဘယျသူကိုမဆို စုံစမျး စဈဆေးနိုငျခှငျ့အပျနှငျးထားပွီး၊ လူထုကို အသိပညာပေးဖို့နဲ့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးအတှငျးမှာ စံသတျမှတျခကျြအဖွဈ ဖျေါဆောငျဖို့တှပေါ တာဝနျယူတယျ။
နိုငျငံရဲ့ ဝနျထမျးတှရေဲ့ လစာကို ပုဂ်ဂလိကဝနျထမျးတှရေဲ့ လစာနဲ့ ခြိနျညှိပွီး သငျ့တငျ့အောငျ၊ လကျတှကေ့အြောငျ သတျမှတျထားတယျ။ ဒီအတှကျ ဝနျထမျးတှဘေကျကလညျး မွငျ့မားတဲ့ စံ၊ ရိုးသားမှုနဲ့ အားထုတျမှုတို့ကို ပွနျပေးရမယျ။
စတုတ်ထ အခကျြကတော့၊ အကငျြ့ပကျြမှုကို လကျမခံတဲ့ ရှောငျကွဉျလာတဲ့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးနဲ့ ယဉျကြေးမှု ပုံစံပါပဲ။ စငျကာပူ လူ့အဖှဲ့အစညျးဟာ သနျ့ရှငျးတဲ့ စနဈကို တောငျးဆိုတယျ၊ အလုပျအဆငျပွဖေို့ “လူမှုရေးအရ ခြူဆီထညျ့” ရတာမြိုးကို မထောကျခံဘူး။ အကငျြ့ပကျြမှုကို တှလေ့ာရငျလညျး တိုငျတနျးဖို့ ဝနျမလေးဘူး။ နိုငျငံသားတှအေနနေဲ့ ဒီဥပဒဟော လူတိုငျးကို သကျရောကျတယျ ဆိုတာရယျ၊ အစိုးရအနနေဲ့ အဂတိတရားတှေ မပါပဲ မကျြနှာ ပကျြစရာ ဖွဈမယျဆိုရငျတောငျ ဥပဒအေရပဲ ဆောငျရှကျမယျ ဆိုတာတှကေို ယုံကွညျတယျ။
နိုငျငံအလိုကျ ထုံးစံ အမြိုးမြိုး ကွုံဖူးတဲ့ စီးပှားရေးသမားတယောကျ စငျကာပူရောကျလာပုံ ဇာတျလမျး တဈပုဒျရှိတယျ။ အစိုးရ အဖှဲ့ဝငျ အဆငျ့ဆငျ့အတှကျ လာဘျထိုးဖို့ ပေါကျဈေးကို လိုကျစုံစမျးလို့မရလို့ ခေါငျးကုတျပွီး ပွနျသှားခဲ့ရဖူးတယျ။ လာဘျထိုးဖို့ ပေါကျဈေးက သိပျမွငျ့လှနျးလို့ ဖွဈမယျလို့တောငျ ထငျသှားလရေဲ့။
စငျကာပူအနနေဲ့ ခွစားမှုပပြောကျရေးမှာ ထိုကျသငျ့သလောကျ အောငျမွငျခဲ့တယျလို့ ပွောနိုငျပမေယျ့၊ ဒီပွဿနာကနေ အမွဈပွတျ ကငျးလှတျပွီးပွီလို့တော့ အထငျမှတျမှားယူဆဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ အကငျြ့ပကျြမှုဆိုတာ လူ့သဘာဝရယျ လောဘရယျကွောငျ့ ဖွဈရပါတယျ။ ဥပဒကေ ဘယျလို ထိနျးခြုပျခြုပျ၊ စနဈက ဘယျလောကျ တငျးကပျြကပျြ၊ တခါတရံ စညျးကို ကြျောခငျြတဲ့ သူတှကေတော့ ရှိနဦေးမှာပါပဲ။ ဒီလိုလူတှကေို ထုတျဖျေါဖို့နဲ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ အရေးယူဖို့ မပကျြမကှကျလုပျတယျ။ အရငျ ၂ နှဈကပဲ စုံစမျးစဈဆေးရေးဗြူရိုက လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူး တယောကျကို ဒျေါလာ ၁၇ သိနျး တလှဲသုံးမှုနဲ့ တရားစှဲခဲ့တယျ။
စနဈကို သနျ့ရှငျးအောငျ လုပျတာဟာ ကနြျောတို့အတှကျအပွငျ၊ နိုငျငံရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို ထိနျးသိမျးမွှငျ့တငျဖို့လညျး ပါပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ စငျကာပူရဲ့ ဘဏျတှကေတဆငျ့ ငှကွေေးခဝါခတြာ၊ မတရားတဲ့ နညျးနဲ့ရတဲ့ ငှတှေကေို လှဲပွောငျး စုဆောငျးတာတှကေိုလညျး တငျးတငျးကပျြကပျြ ကိုငျတှယျရတယျ။ ကနြျောတို့ရဲ့ ငှကွေေး ဗဟိုကမြှုနဲ့ စီးပှားရေး အခကျြအခြာကမြှုကို အားကွိုးမာနျတကျ ကာကှယျသှားမယျ။
“အပျေါထုပျတနျး လိမျရငျ အောကျထုပျတနျး မဖွောငျ့နိုငျဘူး” ဆိုတဲ့ တရုတျစကားပုံတခု ရှိတယျ။ စနဈတခု သနျ့ရှငျးဖို့ဆိုတာ ထိပျဆုံးကနေ စ ရမယျ။ ပွညျပ သငျတနျးတခု သှားတကျတဲ့ တပျမတျော အရာရှိ တယောကျကို သူ့အတနျးဖျော တယောကျက စငျကာပူရဲ့ စနဈကို ဘယျလို သနျ့ရှငျးအောငျ လုပျထားသလဲလို့ မေးဖူးတယျ။
အဲဒီအရာရှိက ဒီက မူဘောငျတှနေဲ့ စုံစမျးစဈဆေးရေးဗြူရိုအကွောငျးကို ရှငျးပွတဲ့အခါ အဲဒီဗြူရိုက ဘယျသူ့ကို သတငျးပို့ရသလဲလို့ ထပျမေးပွနျတယျ။ အရာရှိက ဗြူရိုက ဝနျကွီးခြုပျကို သတငျးပို့ရတယျလို့ ရိုးရိုးဖွတေော့ အတနျးဖျောအတှကျ ပိုတောငျ ဇဝဇေဝါ ဖွဈသှားတော့တာပေါ့။ နောကျမှ စဉျးစားမိတာက တကယျမေးခငျြတဲ့ မေးခှနျးက ထိနျးခြုပျမယျ့သူတှကေို ဘယျသူက ထိနျးခြူပျမှာလဲ ဆိုတာပေါ့။
ရှေးကတညျးက ရှိခဲ့တဲ့ ဒီပုစ်ဆာအတှကျ အဖွတေော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အစိုးရ ထိပျဆုံးကနေ ဟိုးအောကျအထိမှာ အမွငျ့ဆုံး စံခြိနျနဲ့ အစှနျးကုနျ ရိုးဖွောငျ့မှုကိုတော့ ကာကှယျသှားမယျလို့ သန်နိဋ်ဌာနျ ခထြားပါတယျ။ ၁၉၉၆ တုနျးက မစ်စတာ လီကှမျယူနဲ့ ကနြျောတို့နှဈယောကျ အိမျဝယျတဲ့ ကိစ်စမှာ မမှနျမကနျ လြှော့ဈေးနဲ့ ရပါတယျလို့ သတငျးတှထှေကျတော့ အဲဒီအခြိနျက ဝနျကွီးခြုပျဖွဈတဲ့ ဂိုခြုပျတောငျက စုံစမျးစဈဆေးမှုတှေ အပွညျ့အစုံ လုပျဖို့ အမိနျ့ထုတျခဲ့တယျ၊ မမှနျမကနျမှုတှေ ရှိခဲ့တယျလို့ မတှခေဲ့ဘူး။ ဒီကိစ်စကို လှတျတျောကို ဆကျ တငျခဲ့ပွီး သုံးရကျတိုငျတိုငျ ဆှေးနှေးကွားနာမှုတှလေညျး လုပျခဲ့သေးတယျ။
အဲဒီမှာ မစ်စတာ လီ ရော၊ ကနြျောရော ပွောခဲ့တာရှိတယျ။ မစ်စတာ လီ က “ကနြျောဝယျတာရော ဒုဝနျကွီးခြုပျဖွဈတဲ့ ကနြော့သား ဝယျတာရောကို လကျလှတျမပေးဘဲ စုံစမျးစဈဆေးခံရတာကို ဂုဏျယူ ကနြေပျတယျ။ စဈကွောခံရမှုမှာ ဘယျသူမှ ကငျးလှတျခှငျ့မရှိတာရယျ၊ ဘယျလောကျကွီးတဲ့ ဝနျကွီး မဆို မလြျော သွဇာနဲ့ အကငျြ့ပကျြ ရယူတယျလို့ ယူဆရရငျ စုံစမျးစဈဆေးခံရတာတှဟော စငျကာပူအတှကျ အလှနျ အရေးကွီးတယျ” လို့ ပွောခဲ့တယျ။
ယုံကွညျမှုဟာ တညျဆောကျဖို့ ကွာသလောကျ၊ ပကျြဖို့ အငျမတနျ မွနျတယျ။ စငျကာပူမှာ နှဈပေါငျး ၅၀ ကြျော တညျဆောကျခဲ့တယျ။ အစိုးရ၊ စနဈနဲ့ တာဝနျရှိ အမြိုးသား အမြိုးသမီး အားလုံးရဲ့ ဖွောငျ့မတျ မှနျကနျမှုဟာ စငျကာပူအောငျမွငျရခွငျးရဲ့ အဓိက သော့ခကျြပါပဲ။ ဖွောငျ့မတျမှုနဲ့ ဂုဏျသရကေို ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့မှ အထိခိုကျမခံရအောငျ ကာကှယျသှားမယျ့အပွငျ၊ အမြားထကျ အမွဲတမျး သာနအေောငျ၊ နိုငျငံအတှကျ ဂုဏျယူစရာကိစ်စဖွဈအောငျ စိတျပိုငျးဖွတျထားပါတယျ။
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). 2016a. Prevention of Corruption Act, Singapore. Available online.
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). 2016b. About CPIB. Available online.
National Archives of Singapore. 21 May 1996. Statement by Senior Minister Lee Kuan Yew Nassim Jade and Scotts 28. Available online.
စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းပြောတဲ့ စင်ကာပူရဲ့ ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး
ဘာသာပြန်ရေးသားသူ – ကိုငြိမ်းခန့် (NyeinKhant)
ခြစားမှုဆိုတာ နည်းနည်းမှ သည်းခံပေးလို့ မဖြစ်တဲ့ ရောဂါဆိုးပါပဲ။ နိုင်ငံအသီးသီးက ဒီကိစ္စကို တိုက်ထုတ်ဖို့ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးပမ်း ခဲ့ကြတယ်။ ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဌာနဖွဲ့တယ်၊ ပြင်းထန်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းတယ်၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ လိုက်နာဖို့ ကျင့်ဝတ်ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်တယ်၊ ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကလည်း လုပ်ငန်းတွေကို သန့်ရှင်းတဲ့နည်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကတိပြုကြတယ်။
ဒါတွေ လုပ်ပါရဲ့နဲ့ ဒီခြစားတဲ့ကိစ္စဟာ လူ့အဖွဲ့စည်းထဲမှာ မြစ်ပွားနာလိုပဲ ရှိနေဆဲပဲ။ ဒါနဲ့တောင် စင်ကာပူ၏ ခြစားမှု လျှော့ချရေးကိစ္စမှာ အတိုင်းအတာတခုအထိ ဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုရခဲ့သလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အကြောင်းတရား ၄ ချက်ရှိတယ်လို့ တွေ့ရမယ်။
ပထမ အချက်ကတော့ ဗြိတိသျ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ သန့်ရှင်းပြီး အလုပ်ဖြစ်တဲ့ စနစ်ကို အမွေခံရတယ်။ ကိုလိုနီစနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီး ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးချင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း အများကြီးရှိခဲ့ပေမယ့် ဗြိတိသျှတို့ရဲ့ ကျေးဇူးမကင်းတဲ့ ကိစ္စတွေကတော့ အလုပ်ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဥပဒေ၊ ပြည်သူဝန်ထမ်းစနစ်နဲ့ သွက်လက်ပြီး သမာသမတ်ရှိတဲ့ တရားစီရင်ရေး စနစ်တွေပါပဲ။ ကိုလိုနီစည်းမျဉ်းခံ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အဆင့်မြင့်မားခဲ့တာကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တချက်ပါပဲ။
စင်ကာပူရဲ့ နောက်ဆုံး ဘုရင်ခံနဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆာဝီလယံဂူး ဆိုရင် တာဝန်လည်းသိ ခေါင်းဆောင်ရည်လည်း ပြည့်ဝခဲ့တယ်။ သူဆိုရင် (ယခု မလေးရှား ဆာဘား ပြည်နယ်) အရင် မြောက်ဘော်နီယိုမှာ ဘုရင်ခံအဖြစ် ဆက်လုပ်တော့လည်း စင်ကာပူတုန်းကလို နာမည်ကောင်းကျန်ခဲ့တာပါပဲ။ ဆာဘားပြည်နယ်မှာ နောက်မျိုးဆက်အထိ သူ့ကို အမှတ်ရကြဆဲပဲ။
ဒုတိယ အကြောင်းတရားကတော့ ဗြိတိသျှတွေ ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် စင်ကာပူရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ စနစ်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားမယ်ဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်ပါပဲ။ PAP ပါတီအနေနဲ့ ၁၉၅၉ လွတ်လပ်ရေးရအပြီး အာဏာရလာခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ၁၉၅၉ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွယ်လွယ် နိုင်ခဲ့တယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။
တိုင်းပြည်အနေနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေတာ၊ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျတာ၊ အိမ်ယာ မလုံလောက်တာ၊ စီးပွားရေး ကျတာနဲ့ လူဦးရေ ပေါက်ကွဲတာ စတဲ့ ပြသာနာပေါင်း မြောက်မြားစွာ ကြုံခဲ့ရတယ်။ PAP ပါတီအနေနဲ့ ဒီပြသာနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို အမွေခံလိုခဲ့တာလား။ ဘာလို့ အတိုက်အခံအဖြစ်ပဲ ရပ်တည်ပြီး တခြားပါတီကို အုပ်ချုပ်စေ၊ ကျဆုံးစေလို့ မလုပ်ခဲ့သလဲ။
ဝန်ထမ်းတွေ ခြစားတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် မရောက်သွားအောင် ကာကွယ်ဖို့ ကိစ္စက အလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကပဲ ဝန်ကြီးချုပ် လီကွမ်ယူနဲ့ သူအဖွဲ့ကို ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။ ညံ့ဖျင်းတဲ့၊ ခြစားတဲ့ အစိုးရတဆက်ကြောင့် ကျကွဲသွားတဲ့ ကြွေပန်းကန် အကောင်းပြန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုပါပဲ။
ဒါကြောင့်ပဲ PAP ပါတီအနေနဲ့ နိုင်အောင်ပြိုင်ပြီး အစိုးရဖွဲ့ခဲ့တယ်။ လီကွမ်းယူနဲ့ သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေ ရာထူးလက်ခံဖို့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲမှာ အင်္ကျီဘောင်းဘီ အဖြူဝတ်ခဲ့တယ်။ အစိုးရကို သန့်ရှင်အောင်နဲ့ ခြစားလို့မရအောင် ထားမယ်ဆိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်ကို ပြတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒီအချိန်ကစလို့ စင်ကာပူရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ချမှတ်ခဲ့တယ်။
တတိယ အချက်ကတော့ ဥပဒေ ရေးဆွဲတာ၊ ဥပဒေကို စိုးမိုးအောင်လုပ်တာ၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့ လူထုတွေပါ ပါတဲ့၊ ပြီးပြည့်စုံပြီး ခိုင်မာတဲ့ ခြစားမှုကာကွယ်ရေး မူဘောင်တွေကို အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးမှာ သက်ဝင်အောင် နိုင်ငံရေး ခွန်အား အပြည့်နဲ့ ဖေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါပဲ။ ခြစားမှုကာကွယ်ရေး ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး၊ ဒီဥပဒေအရ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို တရားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ရထားတာဖြစ်ကြောင်းကို စွပ်စွဲခံရသူဘက်က သက်သေပြရတယ်။ ဝင်ငွေနဲ့ မလျော်ညီတဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို လာဘ်ယူထားတာအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး သိမ်းဆည်း ခံရမယ်။
ဒီဥပဒေကို နိုင်ငံရပ်ခြားအထိ သက်ရောက်မှုရှိအောင် ရေးဆွဲထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ ကျူးလွန်သည့်တိုင်၊ နိုင်ငံကို မထိခိုက်စေဘူး ဆိုရင်တောင် ပြည်တွင်းမှာ ကျူးလွန်တဲ့ အမှုလိုပဲ သတ်မှတ်တယ်။
ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဌာနဖြစ်တဲ့ အကျင့်ပျက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို (CPIB) ဟာဆိုရင် အင်အား အထောက်အပံ့ ပြည့်စုံပြီး လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ ဒီအဖွဲ့ အနေနဲ့ ရဲအရာရှိ၊ ဝန်ကြီးတွေအပါအဝင် ဘယ်သူကိုမဆို စုံစမ်း စစ်ဆေးနိုင်ခွင့်အပ်နှင်းထားပြီး၊ လူထုကို အသိပညာပေးဖို့နဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ဖေါ်ဆောင်ဖို့တွေပါ တာဝန်ယူတယ်။
နိုင်ငံရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လစာကို ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လစာနဲ့ ချိန်ညှိပြီး သင့်တင့်အောင်၊ လက်တွေ့ကျအောင် သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒီအတွက် ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်း မြင့်မားတဲ့ စံ၊ ရိုးသားမှုနဲ့ အားထုတ်မှုတို့ကို ပြန်ပေးရမယ်။
စတုတ္ထ အချက်ကတော့၊ အကျင့်ပျက်မှုကို လက်မခံတဲ့ ရှောင်ကြဉ်လာတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံပါပဲ။ စင်ကာပူ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ သန့်ရှင်းတဲ့ စနစ်ကို တောင်းဆိုတယ်၊ အလုပ်အဆင်ပြေဖို့ “လူမှုရေးအရ ချူဆီထည့်” ရတာမျိုးကို မထောက်ခံဘူး။ အကျင့်ပျက်မှုကို တွေ့လာရင်လည်း တိုင်တန်းဖို့ ဝန်မလေးဘူး။ နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ဒီဥပဒေဟာ လူတိုင်းကို သက်ရောက်တယ် ဆိုတာရယ်၊ အစိုးရအနေနဲ့ အဂတိတရားတွေ မပါပဲ မျက်နှာ ပျက်စရာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင် ဥပဒေအရပဲ ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုတာတွေကို ယုံကြည်တယ်။
နိုင်ငံအလိုက် ထုံးစံ အမျိုးမျိုး ကြုံဖူးတဲ့ စီးပွားရေးသမားတယောက် စင်ကာပူရောက်လာပုံ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် အဆင့်ဆင့်အတွက် လာဘ်ထိုးဖို့ ပေါက်ဈေးကို လိုက်စုံစမ်းလို့မရလို့ ခေါင်းကုတ်ပြီး ပြန်သွားခဲ့ရဖူးတယ်။ လာဘ်ထိုးဖို့ ပေါက်ဈေးက သိပ်မြင့်လွန်းလို့ ဖြစ်မယ်လို့တောင် ထင်သွားလေရဲ့။
စင်ကာပူအနေနဲ့ ခြစားမှုပပျောက်ရေးမှာ ထိုက်သင့်သလောက် အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့်၊ ဒီပြဿနာကနေ အမြစ်ပြတ် ကင်းလွတ်ပြီးပြီလို့တော့ အထင်မှတ်မှားယူဆဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကျင့်ပျက်မှုဆိုတာ လူ့သဘာဝရယ် လောဘရယ်ကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဥပဒေက ဘယ်လို ထိန်းချုပ်ချုပ်၊ စနစ်က ဘယ်လောက် တင်းကျပ်ကျပ်၊ တခါတရံ စည်းကို ကျော်ချင်တဲ့ သူတွေကတော့ ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ ဒီလိုလူတွေကို ထုတ်ဖေါ်ဖို့နဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူဖို့ မပျက်မကွက်လုပ်တယ်။ အရင် ၂ နှစ်ကပဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုက လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး တယောက်ကို ဒေါ်လာ ၁၇ သိန်း တလွဲသုံးမှုနဲ့ တရားစွဲခဲ့တယ်။
စနစ်ကို သန့်ရှင်းအောင် လုပ်တာဟာ ကျနော်တို့အတွက်အပြင်၊ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ဖို့လည်း ပါပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ စင်ကာပူရဲ့ ဘဏ်တွေကတဆင့် ငွေကြေးခဝါချတာ၊ မတရားတဲ့ နည်းနဲ့ရတဲ့ ငွေတွေကို လွှဲပြောင်း စုဆောင်းတာတွေကိုလည်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်ရတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ငွေကြေး ဗဟိုကျမှုနဲ့ စီးပွားရေး အချက်အချာကျမှုကို အားကြိုးမာန်တက် ကာကွယ်သွားမယ်။
“အပေါ်ထုပ်တန်း လိမ်ရင် အောက်ထုပ်တန်း မဖြောင့်နိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ တရုတ်စကားပုံတခု ရှိတယ်။ စနစ်တခု သန့်ရှင်းဖို့ဆိုတာ ထိပ်ဆုံးကနေ စ ရမယ်။ ပြည်ပ သင်တန်းတခု သွားတက်တဲ့ တပ်မတော် အရာရှိ တယောက်ကို သူ့အတန်းဖော် တယောက်က စင်ကာပူရဲ့ စနစ်ကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ထားသလဲလို့ မေးဖူးတယ်။
အဲဒီအရာရှိက ဒီက မူဘောင်တွေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုအကြောင်းကို ရှင်းပြတဲ့အခါ အဲဒီဗျူရိုက ဘယ်သူ့ကို သတင်းပို့ရသလဲလို့ ထပ်မေးပြန်တယ်။ အရာရှိက ဗျူရိုက ဝန်ကြီးချုပ်ကို သတင်းပို့ရတယ်လို့ ရိုးရိုးဖြေတော့ အတန်းဖော်အတွက် ပိုတောင် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့။ နောက်မှ စဉ်းစားမိတာက တကယ်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းက ထိန်းချုပ်မယ့်သူတွေကို ဘယ်သူက ထိန်းချူပ်မှာလဲ ဆိုတာပေါ့။
ရှေးကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ဒီပုစ္ဆာအတွက် အဖြေတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အစိုးရ ထိပ်ဆုံးကနေ ဟိုးအောက်အထိမှာ အမြင့်ဆုံး စံချိန်နဲ့ အစွန်းကုန် ရိုးဖြောင့်မှုကိုတော့ ကာကွယ်သွားမယ်လို့ သန္နိဋ္ဌာန် ချထားပါတယ်။ ၁၉၉၆ တုန်းက မစ္စတာ လီကွမ်ယူနဲ့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် အိမ်ဝယ်တဲ့ ကိစ္စမှာ မမှန်မကန် လျှော့ဈေးနဲ့ ရပါတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်တော့ အဲဒီအချိန်က ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဂိုချုပ်တောင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ အပြည့်အစုံ လုပ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်၊ မမှန်မကန်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ မတွေ့ခဲ့ဘူး။ ဒီကိစ္စကို လွှတ်တော်ကို ဆက် တင်ခဲ့ပြီး သုံးရက်တိုင်တိုင် ဆွေးနွေးကြားနာမှုတွေလည်း လုပ်ခဲ့သေးတယ်။
အဲဒီမှာ မစ္စတာ လီ ရော၊ ကျနော်ရော ပြောခဲ့တာရှိတယ်။ မစ္စတာ လီ က “ကျနော်ဝယ်တာရော ဒုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ကျနော့သား ဝယ်တာရောကို လက်လွှတ်မပေးဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတာကို ဂုဏ်ယူ ကျေနပ်တယ်။ စစ်ကြောခံရမှုမှာ ဘယ်သူမှ ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိတာရယ်၊ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ ဝန်ကြီး မဆို မလျော် သြဇာနဲ့ အကျင့်ပျက် ရယူတယ်လို့ ယူဆရရင် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရတာတွေဟာ စင်ကာပူအတွက် အလွန် အရေးကြီးတယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်။
ယုံကြည်မှုဟာ တည်ဆောက်ဖို့ ကြာသလောက်၊ ပျက်ဖို့ အင်မတန် မြန်တယ်။ စင်ကာပူမှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ အစိုးရ၊ စနစ်နဲ့ တာဝန်ရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အားလုံးရဲ့ ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်မှုဟာ စင်ကာပူအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့ အဓိက သော့ချက်ပါပဲ။ ဖြောင့်မတ်မှုနဲ့ ဂုဏ်သရေကို ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှ အထိခိုက်မခံရအောင် ကာကွယ်သွားမယ့်အပြင်၊ အများထက် အမြဲတမ်း သာနေအောင်၊ နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူစရာကိစ္စဖြစ်အောင် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။